Swan oo markii ugu harreysay ka hadlay xaaladda Guriceel | KEYDMEDIA ONLINE
Swan oo markii ugu harreysay ka hadlay xaaladda Guriceel
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Swan, ayaa walaac ka muujiyay xaaladda colaadeed ee ka aloosan Guriceel.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ergayga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan, oo ka qeyb galay kulan lagu xusayay maalinta Qaramada Midoobay, ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda iyo dagaallada ka socda Guriceel.
James Swan, ayaa walaac xooggan ka muujiyay dagaalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Guriceel, ee gobolka Galgaduud, (bartamaha Soomaaliya), wuxuuna sheegay in colaadaha Galgaduud horseedi karaan, dib u dhaca doorashada, isla-markaana ay carqalad ku noqon karaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Swan, wuxuu carrabaabay, in dirirta Guriceel, ay saameysay in ka badan 20 kun oo qoys, taas oo la micno ah in ay magaalada ka barakacen, in ka badan 100,000 (boqol kun) oo qof, oo u badan hooyooyin iyo carruur dan-yar ah.
Dhanka kale, Ergayga QM, wuxuu soo dhaweeyay heshiiska Siyaasadeed oo ay gaareen Farmaajo iyo RW Rooble, kaas oo uu ku tilmaamay mid horseedi kara in loogu sii socdo hirgalinta doorashoooyin loo dhan yahay.
Sidoo kale, Dr. Maxamed Ag Ayoya, oo ah wakiilka UNICEF ee Soomaaliya, ayaa madasha ka sheegay in xaaladda bini'aadantinimo ee Soomaaliya, ay weli tahay mid aad u liidata, wuxuuna xusay in qiyaastii 7.7 milyan oo qof la saadaalinayo inay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo sanadka 2022, iyadoo 2.9 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka.